August 02, 2018 - 1:57 pm
August 02, 2018 - 12:01 pm
Zimbabwean police officers cordon off the streets around the MDC opposition party headquarters in Harare, Zimbabwe, Thursday, Aug. 2, 2018. Zimbabwe's acting President said Thursday that his government had been in touch with the main opposition leader in an attempt to ease tensions after election related violence in the capital. (AP Photo/Jerome Delay)
HARARE, Zimbabwe (AP) — The Latest on Zimbabwe's election (all times local): 5 p.m. A lawyer in Zimbabwe says police are investigating opposition presidential candidate Nelson Chamisa and others for allegedly inciting violence. Kumbirai Mafunda confirms that a search warrant was issued on Wednesday...
August 01, 2018 - 1:46 pm
The Latest: Zimbabwe's president blames opposition for chaos
HARARE, Zimbabwe (AP) — The Latest on Zimbabwe's election (all times local): 7:55 p.m. Zimbabwe's president is blaming opposition supporters for the violence in the capital that began with protests over Monday's election results and ended with the military sweeping in with gunfire. At least three...
Police patrol outside the Zimbabwe Electoral Commission offices as opposition supporters gather, in Harare, Zimbabwe, Wednesday, Aug. 1, 2018. Angry opposition supporters gathered outside Zimbabwe's electoral commission and were met by riot police on Wednesday as the country awaited the results of Monday's presidential election, the first after the fall of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Mujahid Safodien)
August 01, 2018 - 8:12 am
HARARE, Zimbabwe (AP) — Hundreds of angry opposition supporters outside Zimbabwe's electoral commission were met by riot police firing tear gas on Wednesday as the country awaited the results of Monday's presidential election, the first after the fall of longtime leader Robert Mugabe. The European...
August 01, 2018 - 5:23 am